हाम्रो बारेमा - नागरिक रैबार
रैबार गणितको सूत्र होइन् । कुनै मन्त्र पनि होइन् । रैबार त केबल नागरिक चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउँछ, हाम्रो विचारलाई प्रष्ट बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठीक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । रैबार एउटा प्रकृया हो ।
साँचो र सत्य रैबार हाम्रो, हामी त्यसका रैबारे’ भन्ने पुख्र्यौली आदर्शबाट अभिप्रेरित भएर हामी समाचार सम्प्रेषण गरिरहने छौं । उही बेला नै हाम्रा पुर्खा दमाह, बजाई भन्नुस् या मादल र सारङ्गीका तार रेटी साँगितिक माध्ययमबाट भन्नुस् अथवा अल्गो ठाउँबाट डाको हाली डाक्ने गर्थे । सोही अनुरुप जनजिवन स्वचालित हुन मद्दत पुग्थ्यो । तर, बिडम्बना आफ्नो रैबारे अभियानका माध्यमबाट नैतिक, चारित्रिक र भौतिक विकासको जुन पाठ उहाँले समाजलाई सिकाउन खोजे हामी त्यसको छेउसम्म पनि पुग्न सकेनौं ।
जसले सूचनाको माध्यमबाट, विचार विमर्शको माध्यमबाट, चिन्तनको माध्यमबाट र प्रयोगको माध्यमबाट हामीलाई सत्यको निकट पु¥याउँछ । सञ्चार क्षेत्रमा नागरिक रैबार मिडिया हाउसको यो यात्रा त्यही रैबार पु¥याउने अभियानतर्फको सशक्त पाइला हो ।
A Brand You Can Trust. generic viagra Our fast, convenient service is extremely straight forward and you don’t need to visitadoctor to use it.
नागरिक रैबार सूचना तथा विश्लेषणको खोजी रहनेहरुका लागि छिनछिनको समाचार पोर्टल हो । यसमा राजनीतिक, सबै खालका सामाजिक विभेद विरुद्ध्, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला साहित्य, सांस्कृतिक, खेलकुदलगायत सबै क्षेत्रका मुद्दाहरु उठाउने जमर्को हुनेछ ।
हामी कसैका होइनौं र हाम्रो कोही होइन । नागरिक रैबार निरपेक्ष रुपमा निष्पक्षताको नारा दिएर कसैको पक्षमा लेख्ने काम गर्ने छैन् । यो राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र आमजनताको पक्षधर समाचार पोर्टलका रुपमा रहनेछ । सापेक्ष रुपमा स्पष्ट विचार र तथ्यमा आधारित सत्य समाचार यसको मूल आधार हुनेछ ।
हामीले सेवा गर्यौँ